Izindawo zokudlela e-la carte: kuyini?
Ukuhamba, Amathiphu wezivakashi
E-Turkey, eGibhithe nakwamanye amazwe, lapho sisanda khona ukuphumula, amahotela okuhlala asemenywa ukuba avakashele enye yokudlela noma yokudla okuningi. Iyini isakhiwo sokudlela? Ihluke kanjani, uthi, kusukela "kokudlela okuyinhloko" ehhotela? Ukugqoka kanjani ukuvakasha kwakhe? Yini ongayenza, indlela yokuziphatha? Ingabe kumnandi ukukhokha? Ngidinga ukushiya ithiphu? Funda konke ngalokhu kulesi sihloko.
Futhi lisho ukuthini igama elithi la carte? Ukuhumusha kunjengokulandelayo: ikhathalogu yezidlo neziphuzo ezitholakala endaweni yokudlela . Lona imenyu. Lolu hlu luhlanganisa namanani entengo ngayinye. Eqinisweni, "i-la carte" yindawo yokudlela evamile kithi sonke, lapho uhlala khona etafuleni, umgcini wezinsizakalo uzokuvakashela, akunike imenyu, ukhetha ukuthi uzodla nobani, futhi kusengaphambili uyazi ukuthi kufanele ukhokhe konke lokhu Ukujabulisa. Kodwa-ke, le nkulumo yesiFulentshi inencazelo ehlukile, ngaphandle kwe "imenyu": i-la carte nayo "ngokuthanda", "ngokuzikhethela". Ekuboneni kuqala kubonakala sengathi lokhu kuyafana. Nokho, lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kule ncwajana, iziphi izivakashi ezinikezwa kwezinye zokudlela nezindawo zokudlela, kungenzeka kube nemenyu ngaphansi kwezinombolo. Ngamunye wabo uthatha isitsha esithile sezitsha ngentengo ehleliwe. Njengomthetho, isaladi, isitsha esishisayo, i-dessert, isiphuzo. Isivakashi sivunyelwe ukukhetha inombolo kuphela yemenyu, kodwa ayikwazi ukwenza uhlu oluphelele lwemikhiqizo oyifunayo. Ku-"la carte" lokhu kunikezwa. Ngesicelo sesivakashi, ungakhonza isitsha nge-ehlobiso noma isaladi.
Uyini umehluko phakathi kwe -la carte yokudlela futhi evamile ehotela lezokuvakasha
Uma uthenga ithikithi eTurkey noma eGibhithe, umqhubi wezokuvakasha, ngokuvamile, udumisa isithunzi sehhotela elithile. Eminye amahhotela anjalo anebhonasi ehlanganisiwe yonke yamakhasimende ane-system-power system: ukuvakashelwa ngesikhathi esisodwa endaweni yokudlela e-la carte. Futhi nsuku zonke, kuphi ukudla? - udidekile. Endaweni yokudlela enkulu yehhotela, insizakalo ibanjwe isitayela se-buffet. Zonke izitsha zikhonjiswe ezikebheni ezinkulu, futhi izivakashi ngokwabo zikhetha ukuthi zinakho nokuthi zingakanani. Kubonakala sengathi awukwazi ukucabanga nganoma yini engcono. Ungazama konke kancane, bese udla ukudla okuthandayo. Noma kunjalo, ukufakwa kwezidlo ezitolo kulezo zokudlela akuguquki futhi kuphazamisa ngokushesha. Ukudla kuyinto evamile, i-European, exotic isebenza ngaphandle dinner. Ngaphezu kwalokho, ezikhungweni ezinjalo, imigqa ingavamile. Kodwa le ndawo yokudlela i-la carte iyindlela ehlukile yokusebenza.
I-charm ehle kakhulu
Noma iyiphi ihhotela elinezinkanyezi ezinhlanu kanye nehhotela elihle ngezinkanyezi ezine eziqinisekisiwe eTurkey naseGibhithe kumele zibe ne-chip enjalo kulabo abavakashile. Ngezinye izikhathi kunezindawo zokudla eziningana, futhi izivakashi zinezilungelo kanye mahhala kuwo ngamunye wazo ukuze adle noma abe nesidlo sakusihlwa. Futhi kumahhotela abizayo kakhulu, njengeKremlin Palace neRixos, indawo yokudlela yase-la carte ingavakashelwa okungenani nsuku zonke. Njengomthetho, lezi yizindawo zokudlela ezihamba phambili . Ngaphezu kwezinto zokudlela ezihlukahlukene zezwe (isiShayina, iSpanishi, isiYapane, njll), zingakwazi ukumelela inkambo eyinhloko yezitsha. Ngakho-ke, kunezindawo zokudlela zokudoba, eziphinde zisebenze ngokudla okuphekwe kahle. Izikhungo ezithakazelisayo "zihanjiswe i-la carte": isivakashi esikhetha inyama, inhlanzi noma imifino, umhlinzeki uletha i-oda ngendlela eluhlaza, kanye ne-mini-brazier. Iklayenti idla isidlo ngokwayo. Ufuna-ngegazi noma ebhakwe emalahle. Kubuye kwenzeke ukuthi kuphakanyiswa ukuba ukhethe igama elilodwa kusuka ekudleni, amasobho, izitsha ezishisayo, izidakamizwa neziphuzo.
I-Etiquette kulezo zokudlela
Indawo yokudlela yase-la carte yekilasi eliphakeme kunendawo ejwayelekile yokudla ehhotela. Futhi noma ngabe ukuvakashelwa kuleyo ndawo yokudlela kufakwe emanani entengovoti, kufanele ulungiselele ukunyuka kuwo. Ngokujwayelekile, imithetho yehhotela ibeka ukubhuka kokuqala kwetafula. Ukudla kukhonjelwa emkhatsini wemikhosi, ngokuvamile ngekhandlela, isitsha siletha umlondolozi, umculo ophilayo uphawula. Lapha akufikanga kakhulu ukudla, njengokuthola injabulo kusuka izitsha ezicwengisisiwe nokuxhumana. Futhi ukudla "ku-la carte" kuyimfanelo ephakeme kakhulu. Iwayini lihanjiswa kakhulu, futhi izitsha zibizwa ngokuthi "ezivela kumphathi". Ngakho-ke, akufanele uhambe endaweni yokudlela ezigqokeni zasebhishi, kodwa ekugqoka izingubo nezembatho. Ngokuqondene nephuzu, bayamukelekile lapha. Ukushiya imali encane kumnikezeli, ngaleyo ndlela udlulisa udumo kumakhono abapheki futhi ubonise ukuthi banelisekile ngensizakalo.
I-Liguria, e-Italy: izindawo zokungcebeleka, izivakashi ezibuyekezwayo
Amabhishi angcono kakhulu eThailand: izithombe, ukubuyekezwa
Iziqhingi ze-Almetyevsk: incazelo, izithombe kanye nokubuyekezwa kwezivakashi
Okuzovakashela eMoscow: okukhangayo kakhulu
I-Evpatoria: uyaphi, ukuthi yini ongayibona? Izikhangibavakashi kanye nokuzijabulisa e-Evpatoria
Salad iresiphi kebab: into esemqoka - ungakhathazeki!
"Smerch" (MLRS): i-TTX nesithombe se-rocket system eminingi
Iron Izithako kwabesifazane abakhulelwe - abasizi ekulweni nesifo sokuntuleka kwegazi
Russia ubeka ijikijolo lapho ekhula
Fibrolitovye amapuleti kanye nokusetshenziswa kwazo ukwakhiwa
Kwenzekani uma ungenawo ukuhlanza ulimi 5 nemiphumela yakho ezingemnandi
Njengoba ijazi wathungela spokes zabesilisa
Kuyini Forex nendlela ukwenza kube